कन्ये च्याउको खेती यसरी गरौँ ! | कृषि टुडे
कन्ये च्याउको खेती यसरी गरौँ !
विनय बराल शनिबार, अशोज १०, २०७७
च्याउ एक किसिमको ढुसी हो । विभिन्न प्रकारका च्याउहरु वनजंगलमा प्रशस्तै मात्रामा पाइन्छन् । च्याउका लहराहरु अर्थात् माइसेलियमको माध्यमबाट ढुसी फैलिएर च्याउको प्रसार हुने गर्दछ । नेपालमा करिब ७०० प्रजातिका च्याउहरु पाइन्छन् । व्यावसायिक रुपले नेपालमा गोब्रे च्याउ, कन्ये च्याउ, रातो च्याउ र सेतो च्याउको खेती गर्दै आइएको छ ।
कन्ये च्याउ खेतीको लागि टहराको निर्माण
टहराको निर्माण गर्न बाँसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सर्वप्रथम टहरा बनाउने उचित ठाउँको रेखांकन गरी भुइँको झारहरु उखेल्ने र जमिनलाई सम्माउने काम गर्नुपर्दछ । टहरा बनाइसकेपछि सूर्यको प्रकाश रोक्न र अँध्यारोपन कायम राख्नको लागि टहरालाई कालो प्लास्टिकले छोप्नु पर्दछ । प्लास्टिकको छानो माथि जुट, खर, पराल आदि राख्दा तापक्रम र सापेक्षित आर्द्रतामा सन्तुलन ल्याउन मद्धत गर्दछ । च्याउका पोकाहरु झुण्डाउनको लागि १ नम्बरी रस्सिको प्रयोग गरी बलोबाट भुईंसम्म पुग्ने गरि लाइन बनाउनु पर्दछ ।
परालको छनोट, तयारी र बफाउने तरिका
च्याउ खेतीको लागि पराल ढुसी रहित, पूर्ण रुपमा सुकेको र सफा हुनुपर्दछ । उक्त पराललाई २ देखि ३ इन्चको टुक्रामा काटेर २ देखि ३ घण्टासम्म सफा पानीमा भिजाउनुपर्दछ । भिजाएको पराललाई निकालेर पानी तैराउनको निम्ति ४ देखि ५ घण्टासम्म चाङ्माथि राख्नु पर्दछ ।
यसरी सफा गरिएको पराललाई अब बफाउनुपर्दछ । पराललाई बफाउँदा परालमा भएका हानिकारक रोग, कीरा आदि नष्ट गर्नमा मद्धत मिल्दछ । सामान्यतया पराल बफाउनको लागि फलामको ड्रमको प्रयोग गर्न सकिन्छ र सोही ड्रमको बिर्को काटी त्यसैलाई छेडेर जाली जस्तो बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि ड्रममा १३ देखि १४ लिटर पानी राख्नुपर्दछ । ड्रमभित्र अट्नी गरेर ६ देखि ८ इन्च लामो खुट्टा भएको बलियो ओदान बनाई ओदान माथि जाली राखी तयार गरिएको पराल राख्नुपर्दछ । पूर्ण रुपमा ड्रममा पराल भरिसकेपछि प्लास्टिकको प्रयोग गरि ड्रमको मुख हावा नछिर्ने गरि बाँधेर बन्द गर्नुपर्दछ । प्लास्टिकको बीचमा पर्ने गरेर सानो प्वाल पनि बनाउनुपर्दछ । पराललाई ड्रममा ३० मिनेटसम्म बफाइ उक्त पराललाई निकालेर सफा ठाउँमा राखि चिसो हुन दिनुपर्दछ ।
उचित बिउको छनोट, पोकामा बिउ हाल्ने र पोका झुण्डाउने तरिका
फोटो : द अर्गानिक प्लान्ट
बिउको छनोट गर्दा न धेरै छिप्पिएको न धेरै कमलो ठिक्क किसिमको बिउ छान्नुपर्दछ । तातै परालमा च्याउको बिउ राखियो भने ढुसी मर्ने हुँदा सेलाएको परालमा मात्र बिउ राख्नुपर्दछ ।
च्याउको पोका बनाउँदा पहिले उपयुक्त प्लास्टिकको छनोट गर्नुपर्दछ । १६x२६ र १८x२४ इन्चका प्लास्टिक उचित हुन्छन् । पोका बनाउँदा सुरुमा अलिकति पराल र अलिकति बिउ एकै ठाउँमा मोलेर प्लास्टिकमा राख्नुपर्दछ र ३ इन्च पराल राखेपछि मात्र अर्को तहको बिउ राख्नुपर्दछ । बिउ राख्दा छेउछेउमा पर्नेगरि वरिपरी हाले ढुसी छिटो फैलिन्छ । २०० ग्रामको बिउको पोकालाई ७ तह हुनेगरी पराल सकेसम्म खाँदेर एउटा पोकाको तौल औसतमा ७ देखि ८ किलो सम्मको बनाउनुपर्दछ । तयार पोकामा हावा संचारको निम्ति सियोहरु मिलाएर बनाएको औजारद्वारा स-साना छिद्रहरु पार्नुपर्दछ ।
तयार भएका पोकाहरु झुण्डाउँदा एउटा पोकाले अर्को पोकालाई छुनुहुँदैन र एउटा लाइनको पोकाहरुले अर्को लाइनको पोकाहरुलाई पनि छुनुहुँदैन । सुरुमा बलोमा झुन्डिएको रस्सीको फेदमा एउटा पोका राखी सुतरीको डोरी बलोको नजिक बाँध्नुपर्दछ । पहिलो पोका भन्दा २ इन्च माथि अर्को पोका राख्ने र त्यसमाथि अर्को पोका गर्दै लाइन तयार गर्न सकिन्छ ।
सम्पूर्ण पोकाहरु झुण्डाइसकेपछि भुइँ सफा गरि चुन राख्दा माटोमा रहेको हानिकारक तत्वहरुलाई फैलिनबाट रोक्दछ । मुसाको समस्याको लागि भने लिसोको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
च्याउको वृद्धि विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
पोकाहरु झुण्डाइसके पछि टहरालाई चारैतिरबाट पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्दछ,
ढुसीको निरन्तर वृद्धि एवम् विकासको अवलोकन गर्नुपर्दछ,
प्लास्टिक बाहिर ढुसी देखियो भने तताएर सेलाएको सफा पानीले पोकालाई बाहिरबाट कपासको प्रयोग गरि सफा गर्नु पर्दछ,
ढुसी फैलाउनको लागि च्याउलाई उपयुक्त हुने तापक्रम १९ देखि २३ डिग्री सेन्ट्रीग्रेड र सापेक्षित आद्रता ८४ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि कायम राख्नु पर्दछ ।
प्लास्टिक काट्ने समय र तरिका
प्लास्टिक काट्दा पनि उमालेको पानी सेलाएर पोका सफा गरेर मात्र काट्नुपर्दछ । सामान्यत गर्मीको मौसममा १६ औं दिनमा प्लास्टिक काट्न उपयुक्त मानिन्छ । पोकामा साना-साना नौनी घिउका जस्ता डल्ला देखिएपछि प्लास्टिक काट्न उपयुक्त समय भनेर बुझ्नुपर्दछ । प्लास्टिक काट्दा पुरै प्लास्टिक हटाइहाल्नु हुँदैन । बरु थोरै मात्रामा प्लास्टिक काटेर प्लास्टिकलाई काटेको ठाउँमा फर्काइदिनुपर्छ । ढुसी मज्जाले फैलेको छैन भने त्यस्तो पोकामा साना-साना २-३ ओटा चिरा बनाउनुपर्दछ ।
तापक्रम हेरेर च्याउ खेतीको लागि सिंचाई पनि आवश्यक पर्दछ । सिंचाई पाइप वा स्प्रेयरको प्रयोग गरि गर्मि मौसममा दिनमा २ देखि ३ पटकसम्म सिंचाई गर्नुपर्दछ । च्याउको पोकासँगै तल भुइँलाई पनि राम्ररी भिजाउनुपर्दछ । बेमौसमी च्याउ खेती गर्दा अत्याधिक गर्मि भएमा दिनमा ३-४ पटक जुटको छानोलाई समेत भिजाउनुपर्दछ ।
च्याउ टिप्ने समय
च्याउका छाताहरु पूर्ण रुपमा फक्रिएपछि मात्र टिप्नुपर्दछ । सुरु-सुरुमा च्याउको टुसा निस्केको दुई दिनमै च्याउ टिप्न योग्य हुन्छ भने पछि ३ देखि ४ दिनमा मात्र टिप्न योग्य हुन्छ । टिप्दा च्याउको गाजलाइ हल्का घुमाउदै परालसँगै फेदैबाट निकाल्नुपर्दछ । यसरी एकै गाजबाट १ के.जी.र सोभन्दा बढी तौलको च्याउ समेत फलाउन सकिन्छ ।
च्याउमा लाग्ने रोग,कीरा र व्यवस्थापन
च्याउमा विभिन्न किसिमका भुसुनाहरु लाग्दछन् । जस्तै फोरिड, सिसिड नाम गरेका भुसुनाले च्याउमा औसा कीरा पारेर एकदमै नोक्सान गर्दछन् । यदि च्याउ टिप्ने समय भन्दा अलि कति पनि ढिलो भयो भने औसाले पुरै च्याउको छाता नै नष्ट गर्दछ । त्यसैले च्याउलाई समयमै टिपेर सरसफाईमा एकदमै ध्यान दिनुपर्दछ।
२.स्प्रिंग टेल (Springtail)
स्प्रिंग टेलको लार्भाले च्याउको ढुसीलाई नै खाएर नस्ट पार्दछ । त्यसैले, च्याउ राखेको ठाउँमा बेलाबेला सफा गर्नुपर्दछ।
ट्राइकोडर्मा नामक ढुसीले निकै ठूलो हानी गर्दछ । पोकाहरु सेतो हुनुको साटो हरियो र अलि कालो रंगमा परिणत भयो भने ट्राइकोडर्मा लागेको हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । यो एकदमै छिटो फैलिने हुँदा देख्ना साथ फाल्नुपर्दछ । यो समस्या टहरा भित्र हावाको बहन र प्रकाश कम हुन गएमा र साथै कार्बोनडाइअक्साइडको मात्रा बढी भएमा देखिन्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापनको लागि कोठामा प्रकाशका साथै दोहोरो हावाको संचालन हुने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
च्याउको बिउलाई मुसाले निकै मन पराउने हुनाले च्याउ खेती गर्दा मुसाले निकै दुख दिने गर्छ । मुसाको समस्या कम गर्नको लागि दैनिक निरीक्षण गरि मुसाको लागि पासोको रुपमा मुसाको खोर वा लिसोको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previous औपचारिक रुपमा नेपाली चियाको ‘ट्रेडमार्क’
Next खसी बोकाको मूल्य निर्धारण